Mpamatsy vokatra sy ozinina - Mpanamboatra vokatra China - Fizarana 4
Saron-tava tarehy tsy azo ampiasaina dia vita amin'ny lamba roa tsy misy tenona misy akanjo mifoka rivotra, azo ampiasaina isan'andro.
Saron-tava tarehy tsy misy fitsaboana azo ampiasaina:
Fanoherana ambany miaina, sivana rivotra mahomby
Aforeto mba hamorona ny habaka miaina telo-mirefy 360 degre
Volavola manokana ho an'ny olon-dehibe
Saron-tava tarehy ho an'ny fampiasana tokana (habe kely)
Volavola manokana ho an'ny zaza
Sarontava fandidiana ara-pahasalamana ho an'ny fampiasana tokana
Ny sarontava fandidiana ara-pitsaboana dia afaka manakana ireo sombina lehibe kokoa noho ny 4 microns amin'ny savaivony. Ny valin'ny fitsapana ao amin'ny Laboratory Closure Mask amin'ny toeram-pitsaboana dia mampiseho fa ny tahan'ny fandefasana sarontava amin'ny fandidiana dia 18,3% ho an'ny sombiny kely kokoa noho ny microns 0,3 araka ny fenitra ara-pitsaboana ankapobeny.
Saron-tava fandidiana fitsaboana:
Sosona lamba manjelanjelatra mikrofiltration: manohitra ny vovobony vovoka vovoka azo avy amin'ny rivotra ary setroka sy zavona
Ny sosona hoditra tsy tenona: ny fifohana ny hamandoana
Sora lamba tsy tenona malefaka: fanoherana rano tsy manam-paharoa
Ny alikaola dia vokatra azo ampiharina, ny fitambaran'izy io dia misy alikaola isopropyl 70% -75%, miaraka amin'ny vokatry ny fanafoanana.
Famonoana otrikaretina 84 miaraka amina karazana sterilisation, tsy fampiatoana ny anjara asan'ny virus
Ity dia atomizer kely ao an-trano misy habe kely sy lanja maivana.
1. Ho an'ny be antitra na ny ankizy izay tsy manana hery fiarovana tsara sy mora voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana vokatry ny fahalotoan'ny rivotra
2.Aza mila mankany amin'ny hopitaly, ampiasao mivantana any an-trano.
3.Mora ny mivoaka, azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra
<< <Teo aloha 12345 Manaraka> >> Pejy 4/5